रोहित, फूटबल र राष्ट्रियता #NepaliFootball #Rohit #WorldCup
"नेपाली खेलाडीमा आर्सेनल र टोटेनह्यामको चासो" यो खबर थियो नागरिक न्युजको । यो खबर को शीर्षक मात्र पढेर छाड्नु जस्तो खबर थिएन नत पढिसकेर पनि नेपालमा केही हुँदैन भनेर नाक खुम्च्याउनु पर्ने खबर नै थियो । नेपाली खेलाडीसँग संसारकै उत्कृष्ट क्लबको नाम जोडिएर आउनु एउटा आश्चर्यकै कुरा हो, एउटा सुखद आश्चार्य,मुटुमा सुसुप्त भै बसेको राष्ट्रियता जुरुक्क उठ्ने किसिमको आश्चार्य । नेपाली फूटबल खेलाडी रोहित चन्द्को सफलताको यो खबर सुन्दा अस्ति भएको विश्वकप छनोटमा इष्ट टिमोरबिरुद्ध नेपालको खेल हेर्न उर्लिएको भिड मात्र हैन समस्त फूटबल प्रेमी नेपाली जनता खुशी छन् ।
खबर पुरै पढिसकेपछी लाग्यो नेपाली फूटबलले पक्कै फड्को मारेछ । विश्वकप खेलिसकेको राष्ट्र उत्तर कोरियाबिरुद्धको उत्कृष्ट प्रदर्शन, र इष्ट टिमोर बिरुद्धको सान्दार बिजयले सबै फूटबल प्रेमिको मुटु गर्वले धक्क फुलेको छ । पक्कै पनि यो सफलताको पछाडि ब्रिटिश प्रशिक्षक ग्राहम रोबर्टसको सरहानिय योगदान छ । साथै खेलाडीहरुको मेहनत र आत्मविश्वास पनि, जसले नेपाल नेपाल भन्दै दशरथ रंगशालामा उर्लिएको भिडलाई निरास फर्काएन । बरु थपिदियो आशा केही हुन्छ नेपाली फूटबलमा भन्ने । विश्वकप छनोटको खेलमा नेपालको प्रदर्शनले हौसिएका नेपाली दर्शकहरुलाई रोहित चन्दसँग आर्सनल र टोटेन्हमको नाम जोडिएर आएको खबरले झन् उत्साहित बनाएको छ ।
बिचरा हामी नेपालीहरु,साँचै हामी कठै बरा भन्न लायक प्राणी भइसक्यौँ । हो साँच्चै, कती हिंड्ने पार्टीको झन्डा बोकेर हामी, कती लड्ने यो जात त्यो जात, मलाई अधिकार मलाई अधिकार भनेर आफु आँफैसँग । कती गाली गर्नु नेताहरुलाई । कती सराप्नु पुरै सिस्टमलाई । म नेपाली हुँ भनेर कुन कुरामा गर्व गर्नु, बुद्धको देश? बुद्ध भारतमा जन्मिएका हुन भनेर खुलेआम प्रचार गरिँदा नि सरकार मौन छ । कि सुन्दर प्रकृतिक राष्ट्र, अनी खोइ त पर्यटक भित्राउने प्रयत्न? भयो राजनितिको त कुरा नगरौँ । अनी के मा गर्व गर्ने नेपालीले? कुन सुत्रमा एउटै भएर बाँधिने त हामी? तर पनि देशको माया त हुन्छ सबैलाई गर्व गर्ने ठाउँ त खोज्छ यो नेपाली मुटुले । अनि जब नेपाली मैदानमा फूटबल, क्रीकेट खेलिन्छ तब जुर्मुरिँदै उठ्छ नेपालीको राष्ट्रियता । जोशका साथ फहराइन्छ रातो र चन्द्र तथा सूर्य अंकित झन्डा । गुन्जिन्छ नेपाल आमाको नाम सबै कुरा बिर्सेर । त्यहाँ देखिन्छ एकता, राष्ट्रियता ,उत्साह, उमँग । बिर्सिन्छन् सबैले जतिय नारा,त्यहाँ झल्कन्छ राष्ट्रिय प्रेम ।
फूटबलको दाजोँमा क्रिकेटले छोटो समयमा नै फड्को मार्यो । उमेर समुहमा ठुलो सफलता पनि दिलाउँदै आएको छ तर पनि विश्वकपको सपना पुरा हुन सकेको छैन । आशा गरौँ त्यो सपना पनि एक दिन साकार होला । फूटबलको क्षेत्रमा यो सफलता साँच्चै गर्व गर्न लायक हो । जर्जर आर्थिक अवस्था,घृणायोग्य राजनिती ,डामाडोल अवस्थामा पनि यो सफलता हात पार्नु सानो कुरा हैन । त्यसैले त सबै नेपाली खुशी छन्, उत्साहित छन । यो सफलतासंगै । राष्ट्रका नागरिकलाई गर्व गर्ने एउटा ठाउँ चाहिन्छ । हाम्रै छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गरौँ, त्यति विशाल राष्ट्र, अनेक भाषा, राष्ट्रिय भाषा हिन्दी अनि दक्षिणका मानिसलाई हिन्दी बोल्न आउँदैन तर पनि जब निलो जर्सिमा क्रीकेट टीम मैदानमा उत्रन्छ सबैको मुखमा ईन्डिया हुन्छ । एउटै धागोमा बाँधेको छ उनिहरुलाई क्रीकेटले । हामी पनि त्यही खोजी रहेछौँ,र एउटा आशाको झिल्को रोहित र नेपाली फूटबल बनेको छ ।
कामना यही छ आज हामीले पनि नेपाली भनी गर्व गर्ने ठाउँ पाइयोस । अस्त व्यस्त राजनिती एउटा ठेगानमा आओस्। प्रगती होस् खेलकुद जगतमा , खेलकुदमा मात्र हैन पर्यटनमा, शिक्षामा, सबै क्षेत्रमा सुधार आओस् किनकी गर्‍यो भने सम्भव छ भन्ने कुरा नेपाली फूटबल र रोहित चन्द्ले देखाइ सकेका छन् । सलाम रोहित लगायत समस्त खेलाडिलाई । र धन्यवाद पनि अनी शुभकामना पनि निकट भविष्यमा हुन लागेको जोर्डन बिरुद्धको खेलको लागि । सम्पूर्ण नेपालीले गर्व गर्ने ठाउँ पाउन् । एकताको आधार पाउन् । चन्द्र सुर्य अँकित नेपाली झन्डा फहराउन पाइयोस् । फेरी एकचोटि शुभकामना जोर्डनविरुध्दको खेलको लागि नेपाली टिम र रोहितलाई । जय नेपाल ।
Gunjan Khanal August 1, 2012 at 11:56 AM
Nepal ko jay hos
rajan kathet August 1, 2012 at 11:56 AM
yo khabar suner malai pani dherai khusi laageko chha
Prakash Tim August 1, 2012 at 11:56 AM
nepal ka neta haru jasta bhaye pani...nepali janata mahan chan...jay nepal
Tour in nepal August 1, 2012 at 11:56 AM
Haha tehi bhayera nepal le9goal khayeo. kam se kam south korea sanga kheleko jatiko ta khelnu parchha. tehi pani bhayena. paryas jari chha. best of luck